खाना खाए लगत्तै गर्नु हुँदैन यी ७ काम - सफलताका सुत्रहरु
Home/जीवनशैली/खाना खाए लगत्तै गर्नु हुँदैन यी ७ काम
काठमाडौँ । हामीले खानापानको बारेमा धेरै सुनेका छौँ । तर, के तपाईले खाना खाए लगत्तै के–के गर्नबाट बच्नुपर्छ भन्नेबारे कहिल्यै सोच्नु भएको छ ? धेरैजसोलाई थाहा हुनसक्छ, तर पनि त्यसप्रति खासै ध्यान दिइरहेका हुँदैनौ । सुन्दा सामान्य लाग्ने तर यसको दीर्घकालिन प्रभाव असामान्य हुन्छ । तपाई खानामा षौष्टिक र राम्रो खानुहुन्छ, तर त्यो खाना शरीरमा नलागेमा नखाए बराबर हुन्छ । यदी तपाई आफूले खाएको खाना शरीरमा राम्ररी लागोस् भन्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले केही बानीमा सुधार ल्याउनुपर्छ । खाना खाने वित्तिकै स्वास्थ्यलाई असर पार्ने यस्ता क्रियाहरु नगर्नुहोस् ।
धुम्रपान स्वास्थ्यका लागि त्यसै पनि हानिकार हुन्छ । विशेषज्ञका अनुसार, खाना खाएपछि तुरुन्तै धम्रपान गर्नाले पाचन प्रक्रियामा समस्या आउन सक्छ । रोचक कुरा के छ भने, धुम्रपान गर्ने बानी भएका व्यक्तिमा खाना खाएपछि नै चुरोट पिउने वा सुर्तीको बढी तलतल लाग्ने हुन्छ । तर, यस्तो गर्नबाट बच्नुपर्छ । खाना खाए लगत्तै धुम्रपान गर्नाले ग्यास्ट्रिक र एसिडिटी समस्या हुनसक्छ ।
यदी तपाई खानासँगै फलफुल खानुहुन्छ भने आमाशयमा अड्किने सम्भावना हुन्छ, जसले गर्दा सही समयमा आन्द्रामा पुग्न पाउँदैन । यसले पेटमा खानालाई दुषित बनाउँछ । त्यसैले, खाना खाएपछि कम्तिमा एक घण्टापछि वा पहिले नै फल खाने सल्लाह दिइन्छ । बिहान खाली पेटमा फलफुलको सेवन गर्नु सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ, जसले दिउसो भरी ऊर्जा दिन्छ ।
चिया वा कफी पिउनु
खाने खाए लगत्तै चिया पिउनुहुँदैन । चियाको पत्तीमा रहेको एसिडले खानामा पाइने प्रोटिनलाई नोक्सान पुर्याउँछ । जसका कारण खाना पचाउनमा समस्या उत्पन्न हुन्छ । खाना खाएको एक घण्टा पछि चिया पिउनु राम्रो मानिन्छ ।
बेल्ट खुकुलो बनाउनु
यदी तपाई निक्कै भोक लागेमा वा स्वादिष्ट खाना देखेपछि आफ्नो बेल्ट खुकुलो बनाउनुहुन्छ र मन भरिने गरी खानुहुन्छ भने यसले पनि स्वास्थ्यमा असर पुर्याउछ । खाना खाने समयमा बेल्ट लुज बनाउँनु हुँदैन । यसो गर्नाले आन्द्रा ब्लक हुने र खाना बढी खाइने हुन्छ । जसले गर्दा असहज महशुस हुन्छ । अत्यन्तै भोक लागेको बेला थोरै कम खानुपर्छ भनिन्छ ।
खाना खाएपछि लगत्तै नुहाउँनु हुँदैन । यसो गर्नाले हात, खुट्टा र शरीरमा रगतमा प्रवाह बढेर जान्छ । यस्तो अवस्थामा पटेको सबैतिर रगतको मात्रा कम हुन जान्छ । जसले गर्दा पाचन प्रणाली खराब बन्छ ।
हिड्नु स्वास्थ्यका लागि फलदायी हुन्छ, तर खाना खाए लगत्तै हिड्नु हुँदैन । यसले अपचको समस्या हुनसक्छ । यद्यपी, खाना खाएको आधा घण्टापछि टहलिनु स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिन्छ ।
तुरुन्तै सुत्न जानु
जो व्यक्ति खाना खाने बित्तिकै ओछ्यान लाग्छ, उसको खाना राम्ररी पच्न पाउँदैन । यसका कारण ग्यासको समस्या उत्पन्न हुनसक्छ र आन्द्रामा संक्रमण हुनसक्छ ।
केही मननयोग्य महान भनाईहरु
केही मननयोग्य महान अनि उत्प्रेरक भनाईहरु
१२ पुष २०७४, बुधबार ०८:४०
२५ आश्विन २०७४, बुधबार ०९:३४
७ पुष २०७४, शुक्रबार १०:०८
होली खेल्नुअघि जान्नैपर्ने कुरा, रंगले हुनसक्छ छालाको क्यान्सर
१६ फाल्गुन २०७४, बुधबार १२:०४
साप्ताहिक राशिफल (२०७४ असोज १५-२१)
१६ आश्विन २०७४, सोमबार १४:२२
तपाईंको अनुहारमा हिँड्छन् डरलाग्दा किरा, जति धुँदा पनि जाँदैनन् !
२९ पुष २०७४, शनिबार ०८:२९
१ पुष २०७४, शनिबार २३:२६
५ पुष २०७४, बुधबार ०९:०९